Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa N'ogbe Slow rebound memeory ụfụfụ ohiri isi withgoodprice-Rayson
Imirikiti ụlọ ọrụ na-echekwa ego na ngwaahịa a. Ezubere ya iji dabaa mgbanwe ndị na-aga n'ihu n'oge nrụpụta na-aga n'ihu, na-achọ ịbawanye arụmọrụ ma belata ọnụahịa.
R $ $> Rayson Global Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ njikọta nke China na US, nke hibere na 2007 nke dị na Shishan Town, Foshan High-Tech Mpaghara, ọ dịkwa nso na ụlọ ọrụ ama ama dịka V
Anyị na-agbaso usoro njikwa njikwa ọkọlọtọ iji hụ na ngwaahịa anyị na-ezute ma ọ bụ gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ ndị na-ere ahịa mgbe achara ahịa maka ụwa niile. Anyị na-ekwe nkwa na e zigara ndị ahịa ngwaahịa ahụ nchekwa na ụda.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịmatakwu banyere ， kpọọ anyị ozugbo. Ruo ugbu a, Rayson agafeela asambodo sistemụ njikwa njikwa mba ụwa. Ngwa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị
na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na asọmpi ahịa. Ogologo oge ole ka akwa ụra gị kwesịrị ịdị? Matarasị ọ bụla dị iche. Ọ bụrụ n ’ị na-amali elu n’abalị ma ọ bụ jiri ụra teta ụra oge eruola ka ị nweta akwa ụra ọhụrụ n'agbanyeghị afọ ole ọ dị. Anyị na-akwado ịlele mkpado iwu ma dochie ma ọ dịkarịa ala afọ asatọ ọ bụla. An nwere ike inyere m aka ịme nke anyị ma ọ bụ jiri akara m na ngwaahịa ahụ? Anyị nwere ike ime matraasi dị ka gị imewe ma ọ bụ nye OEM ọrụ dị nnọọ mkpa ka ị na-enye anyị ngwaahịa gị artwork ma ọ bụ logo photos.May m gaa gị factory? Ee, ịnabata ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị nọ nso ọdụ ụgbọ elu mba Guangzhou Baiyun, ọ na-ewe naanị otu awa n'ụgbọ ala, anyị nwekwara ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.